Telefaona misy 5G izay azontsika vidiana any Espana | Androidsis
Ny 5G dia efa ampiasain'ny firenena maro any Eropa. Amin'ny raharahan'i Espana dia i Vodafone no miandraikitra ny fanaovana izany, zavatra nitranga herinandro vitsivitsy lasa izay. Mba hahafahanao mankafy an'ity teknolojia vaovao ity any amin'ny tanàna maro ao amin'ny firenena. Ity fametrahana ity dia midika fa ny telefaona mifanentana voalohany dia manomboka manomboka amin'ny fomba ofisialy eny an-tsena ihany koa.
Amin'ny Mey ny telefaona 5G voalohany dia nanomboka tonga tany Eropa amin'ny fomba ofisialy, manokana any Suisse. Nandritra ny herinandro maro dia nanitatra tsena marobe izy ireo, toa an'i Espana. Eto amin'ny firenentsika dia efa afaka mividy telefaona mifanentana maromaro isika amin'ny fomba ofisialy.
Ny telefaona farany tonga tany Espana, azo zahana amin'ity zoma ity noho ny fisokafan'ny fivarotana Huawei any Madrid. Ity Huawei Mate 20 X 5G ity dia kinova mifanentana amin'ny avo lenta natolotry ny marika sinoa tamin'ny taon-dasa. Ny famaritana ny telefaona dia mijanona ho tsy miova amin'ity tranga ity, ny fampifanarahana ireo tambajotra ireo dia nampidirina fotsiny, noho ny fisian'ny modem Balong 5000 an'ny marika.
Amin'izao fotoana izao dia afaka mividy izany maimaim-poana isika, izay misy vidiny 1.049 euro, araka ny efa fantatsika. Na dia i Vodafone aza dia efa nanipy fa vetivety dia ho afaka hividy azy ireo koa isika. Ka ny mpampiasa dia efa afaka manana taha mifanaraka amin'izany. Tsy mbola nisy daty nomena an'io momba io, fa tokony ho ela io. Koa satria i Vodafone dia mitady hanitatra ny isan-karazany ny telefaona misy 5G.
Ny marika koreana no nanolotra an'ity telefaona ity tao amin'ny MWC 2019, ny voalohany amin'ny katalaoginy manana fifanarahana 5G. Modely iray izay efa afaka mividy amin'ny fomba ofisialy any Espana isika mandritra ny herinandro vitsivitsy, araka izay efa nolazainay taminao tamin'ny androny. Fitaovana iray izay aseho ho safidy tsara hilalaovana, noho ny fanampin-javatra izay ahafahanao manana efijery roa, ho an'ny traikefa tsaratsara kokoa miaraka aminy.
Amin'ity tranga ity, ireo liana amin'ny LG V50 ThinQ dia mila mivadika eny na eny mankany Vodafone. Azontsika atao ny misafidy telefaona miaraka amina andiana isa, izay mampiova ny vidiny amin'io lafiny io, miaraka amin'ny vidiny eo anelanelan'ny 899 sy 1.150 euro arakaraka ny tahan'ny voafidy. Amin'izao fotoana izao dia tsy afaka mividy maimaim-poana ianao, na dia efa nilaza mazava aza ny marika fa hanao izany mandritra ny fotoana fohy. Saingy tsy nisy voalaza momba ny fotoana hitrangan'izany.
Telefaona iray izay nambara tamin'ny faran'ny taona lasa ary tamin'ny farany dia natolotra tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny MWC 2019. Herinandro vitsivitsy izay no vitantsika vidio amin'ny fomba ofisialy ity telefaona Xiaomi ity any Espana. Safidy iray hafa tsara eo amin'ity sehatry ny tsena ity, izay ahitan'ny marika sinoa ho iray amin'ireo voalohany manana telefaona mifanentana eny an-tsena. Ka famotsorana lehibe ho anao io.
Ao amin'ny tranokalan'ny marika sinoa dia mivoaka miaraka amin'ny vidiny 599 euro, izay ahafahantsika mividy azy io maimaim-poana. Na dia misy ihany koa ny mety hividianana azy amin'ny taha vitsivitsy avy amin'i Vodafone, ilay mpandraharaha miandraikitra 5G hatreto any Espana. Amin'ity tranga ity, miankina amin'ny tahan'ny safidinao dia mety tsy mitovy ny vidiny.
Iray amin'ireo telefaona 5G andrasana indrindra eny an-tsena, izay efa azontsika vidina amin'ny Vodafone. Ny Galaxy S10 5G dia mpivarotra any Korea atsimo, izay nipoitra ho maodely amidy indrindra. Farany dia afaka mividy azy io amin'ny mpandraharaha isika, izay iray amin'ireo telefaona andrasan'ny mpampiasa maro.
Miankina amin'ny tahan'ny voafantina, miovaova ny vidin'ny telefaona, eo anelanelan'ny 1.079 sy 1.296 euro. Ka hiankina amin'izay safidin'ny mpampiasa tsirairay amin'ity lafiny ity. Telefaona antsoina hoe fahombiazana, noho izany azo antoka fa ho lasa safidy malaza eo amin'ireo mpampiasa izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Telefaona 5G inona no azontsika vidiana anio?
OS Fuchsia: Ny zavatra fantatsika hatreto